BlueStacks2ကို PC / Mac ကို / Laptop ကို / Windows XP ကို ​​/7/ 8.1 / 10 များအတွက်အခမဲ့ Download လုပ် - ကို PC / Mac ကို / Laptop ကို / Windows XP ကို ​​/2/7/ 8.1 များအတွက် BlueStacks 10 အခမဲ့ download လုပ်ပါ။ PC ကွန်ပျူတာနဲ့ Mac ပေါ်မှာက Android emulator / BlueStacks App ကို Player ကို Install လုပ်ပါ။
မိုဘိုင်း application များကျယ်ပြန့် installed နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာကအသုံးပြုကြသည်။ မိုဘိုင်း app ကို download အရေအတွက်စာရင်းဇယားနှုန်းအဖြစ် 224 အတွက် 2016 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်သိရသည်။ သူတို့အား downloads, များထဲတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်း Android နှင့် iOS app ကိုဖြစ်ကြသည်။ အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်း app ကိုဈေးကွက်ကိုဦးဆောင်နေသည်နှင့်အတူဦးဆောင် app ကိုအမျိုးအစားကိရိယာများ, ဆက်သွယ်ရေး, ဗီဒီယိုပလေယာ, ခရီးသွား, လူမှုရေး, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဂီတ, အသံ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်သတင်းပါဝင်သည်။
Angry Bird ကို, အသီး Ninja, Candy Crush Saga ကဲ့သို့စျေးကွက်အတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောလူကြိုက်များတဲ့က Android app များကိုအတူ, Instagram ကို, Facebook, WhatsApp ကို, Snapchat အများအပြားကပိုတစျခု, တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောထားပြီး apps များစွဲနေကြတယ်, သူတို့အစွဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
သငျသညျ 10 / 8.1 / 8 /7သို့မဟုတ် XP operating system ကို run နေ Windows PC မှာသင်အကြိုက်ဆုံးက Android app တွေကို run / play နိုင်ဆိုပါစို့။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းစမတ်ဖုန်းရဲ့သေးငယ်တဲ့ screen ၏ပင်ပန်းဖြစ်ကြပြီးသင်က Windows က Desktop ကိုသို့မဟုတ် Windows Laptop ကို၏ပိုကြီးဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှသောသူတို့သည် apps များကစားရန်အိပ်မက်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အဲဒီကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ပိုကြီးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘယ်လိုဖြစ်သနည်း
တစ်ဦးအလိုတော်ရှိသည့်အခါကောင်းပြီ, ဒါဆိုတစ်လမ်းလည်းမရှိ။ အဆိုပါပိုကြီးမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖြေဖြစ်ပါသည် BlueStacks App ကို Player ကို။ ဟုတ်ကဲ့, သင်ကညာဘက်ကိုငါကြား၏။ PC အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် BlueStacks ဗားရှင်းသင်သည်သင်၏ Windows PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုအပေါ် (လှုပ်ရှားမှု, Arcade တူသောထိပ်တန်းအမျိုးအစားမှ apps များ, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး, ပဟေဠိ, အခန်းက္ပ Play, ပုံရိပ်စစ်စတာတွေအပါအဝင်) သင်အကြိုက်ဆုံးက Android Apps ကပ run ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ PC ပေါ်မှာ Android app များခံစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသလား
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်ကို download လုပ်ပါ install နှင့် BlueStacks App ကို Player ကို run ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်, tricks, အကြံပေးချက်များ, features နဲ့လဲ tutorial ကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ညှိနှင့် BlueStacks အပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအဘို့အကြှနျုပျတို့၏ website စစ်ဆေးနေစောင့်ရှောက်နေပါ။
BlueStacks App ကို Player ကိုကဘာလဲ?
BlueStacks သငျသညျ, ဒေါင်းလုပ်လုပ်အင်စတောလုပ်နဲ့ Windows PC နဲ့ Mac အတွက်မိုဘိုင်း apps များကစားပေးနိုင်ပါတယ်သောဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ် application ဖြစ်ပါတယ်။ BlueStacks ကမ္ဘာတဝှမ်းထက်ပို 2011 လူဦးရေသန်းပိုကြီးဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ 130 နှင့်လူကြိုက်များမိုဘိုင်းဂိမ်း 2017 လူကြိုက်များမိုဘိုင်း apps run နှင့်ဆော့ကစားရန်အ App ကို Player ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် 2017 အတွက် BlueStacks Inc ကိုတို့ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးယနေ့အဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Layercake ဟုခေါ်တွင်မူပိုင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ PC မှာကမ္ဘာကြီးကို 2017 နှင့်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်း 2017 အတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း app များကိုငါပေးမည်။
BlueStacks App ကို Player ကို၏အင်္ဂါရပ်များ...
အခမဲ့, ဟုတ်ကဲ့ BlueStacks မည်သူမဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်
ဒါဟာမောက်စ်နဲ့ကီးဘုတ်အတွက် optimized ဖြစ်ပါတယ်
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော WeChat စသည်တို့ကို WhatsApp ကို, ကြေးနန်း, အဖြစ်စာပို့ခြင်း apps များ 2017 run ကြရအောင်
Windows ကို PC နဲ့ Android App များအကြားဝေစုဖိုင်တွေ
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Cast တိုက်ပွဲများ, Candy Crush, Clan ၏တိုက်ပွဲများအဖြစ်အံ့သြဖွယ်ဂိမ်း Play
သန်း 1.5 ကျော်က Android ဂိမ်းများနှင့် BlueStacks သုံးပြီးဆပ်ဖို့မရရှိနိုင် 500,000 + HTML5 / Flash ကိုဂိမ်း
ဒါဟာကို PC, Mac, Android HTML5 နှင့် Flash နှင့်သဟဇာတဖြစ်
သငျသညျ Twitch အပေါ်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်
Multi-tasking ကိုဆက်ကပ်ခြင်းနှင့်တဦးတည်း Play နိုငျသညျ, Stream နှင့်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
PC အတွက် BlueStacks Download, BlueStacks အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
သငျသညျကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့သင်က install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းရှိ BlueStacks တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန် ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်အတူသင်ကူညီရန်။
ရုံ, အစစျဆေးဖို့မမေ့မလြော့ပါ BlueStacks စနစ်လိုအပ်ချက်များ.
Mac ကသည် BlueStacks (5)
Windows ကိုများအတွက် BlueStacks (12)
BlueStacks သိကောင်းစရာများ (14)